मुगुमा स्याउ फस्टायाे, किसानकाे समस्या कसले देख्ने ? « News24 : Premium News Channel
मुगुमा स्याउ फस्टायाे, किसानकाे समस्या कसले देख्ने ?
मुगु, २८ साउन । समयमा विरुवा काँटछाँट, मलजलको पर्याप्त व्यवस्था गर्न सके हरेक वर्ष स्याउको उतपादन प्रशस्त हुने गर्छ । स्याउ कृषकले यसपालि पनि समयमा नै ध्यान दिएकाले मुगु जिल्लामा स्याउ उत्पादन फस्टाएको छ ।